ILuz-Ixesha lokuzalisekiswa kweZiprofetho eziKhulu-Ukuhla eBukumkanini
ISt	NguLuz de Maria de Bonilla ngo-Novemba 12, 2021:
Abantu Abathandekayo Boyena Bathathu Emnye: Ndithunywe ukuba ndibelane nani ngeMyolelo kaBathathu Emnye. Ndize kunibiza ngokungxamisekileyo ukuze nizilungiselele ngokwasemoyeni. Bonke abantu kufuneka bakhule emoyeni, balwele usindiso lwabo kwaye kwangaxeshanye bancede abazalwana noodade babo ngobuzalwana xa bejamelene neembandezelo osele uziva kunye nezo ziseza kutyhilwa ngokupheleleyo. Ndinibizela ekulungiseleleni ngokomoya, ngaphandle apho uluntu aluyi kukwazi ukoyisa ubungendawo babo balandela imiyalelo yoMchasi-Kristu.
Kufuneka uzimisele ngakumbi! Niyazi nonke ukuba uluntu luzifumana lukwixesha lokuzaliseka kweziprofeto; yinto nje yokuba abanye babone ukanti abafuni ukuyibona into eyenzekayo ngokwenene. Abayiqondi imiqondiso nemiqondiso! Abantu abangenalwazi nabanengqondo ephangaleleyo banenkani, babambe umoya wabo kwiminqweno yabo kunye nokungakhathali. Nangona bekuqinisekisa ukuba akukafiki ixesha lokuzaliseka kweziprofeto ezikhulu, wena oyaziyo imiqondiso nemiqondiso ufanele uhlale uqinile ekuqondeni kwakho.
Kuyimfuneko enkulu kuwe ukuba uphakamise imimoya yakho ukuze ukhule ngamaxesha onke. Kufuneka ube nokuqonda ukuze ungakhokelelwa kwimisebenzi nakwizenzo ezichasene nemigaqo yakho. Kungxamisekile ngoluntu ukuba lube nekhondo eliqinisekileyo nokuba luxhotyiswe ngolwazi ukuze lungamshiyi uKumkani Wethu neNkosi uYesu Kristu ngokukhohliswa. Esi sizukulwana siya kudlula kwiindawo ezimbini: Elinye lelo lokubandezeleka okugqithisileyo-imeko eya kukhokelela abantu ukuba babamonele abafileyo…. (cf. ISityhi. 9: 6). Enye yimeko ebalaseleyo yokonwabela uThando lobuThixo kunye nokuziva ngokunzulu ubukho bukaKumkanikazi noMama wethu.
Ngaphandle kokushiya isiqalo soguqulo kamva, zilahleni ukuba ngabantwana beNtando yobuThixo, abantwana beKumkanikazi noMama. Zilungiselele ngoku ukucela uncedo lwethu! Ukuba iziganeko zifika zingaxelwanga, into yokuba uzimisele ukuba ngabantwana beNtando yobuThixo iya kuthathelwa ingqalelo "ipso facto".
Abantu bakaBathathu Emnye: Iintlekele ezimandundu ziya kuqhubeka zivela emhlabeni wonke: iimpazamo zetectonic ziye zasebenza ngokupheleleyo kwaye kuya kubakho iindaba zeziganeko zomoya eziya kuchaphazela inqwelomoya. Kuya kubakho iindaba zezikhukula ebezingalindelekanga kumazwe ahlukeneyo Kwiintsuku ezintathu emva kwesi sigidimi, “umkhukula wenkulungwane” wahlasela iphondo laseKhanada, iBritish Columbia; cf. cbc.ca kunye nezinto eziza eMhlabeni zivela esithubeni… ngaphandle kokulibala ukuqhubeka kwemfazwe. Lungela! Iingqondo ezithatyathwe bububi zilungiselele uluntu ukuba luhlupheke ngaphandle kwetekhnoloji kunye nenkqubela phambili oyonwabelayo, ngaphandle kombane okanye ukutya. Intuthuzelo iya kuba liphupha lexesha elidlulileyo.
Kwabo baphila ngokuthobela kwaye bazithembela ngokholo nothando kwintando kaBathathu Emnye kunye nakuKumkanikazi wethu kunye noMama, iziganeko ziya kuba yintuthumbo encinci. Abo bahlala bemonela abazalwana noodade babo, abangenamonde, abanekratshi, abanekratshi nabangayithobeliyo iNtando kaBathathu Emnye, abayi kuba nalo uxolo ezintliziyweni zabo, kwaye oko kuya kwenzeka kuya kubathuthumbisa ngokwenene.
Bangaphi abalindele iSilumkiso ngaphandle kokuphonononga ngengqondo ubomi babo - zonke iinkcukacha, isenzo kunye nesenzo abasenzayo okanye ngaphandle kwemvume, ukuze bafune uXolelo lobuthixo kwaye bazilungiselele ixesha leSilumkiso? Isilumkiso sesona senzo sikhulu seNceba yobuThixo kwesi sizukulwana, apho nizibona ngendlela ethile, xa niya kuliva ixabiso lezenzo zenu okanye izinto enizishiyileyo. Funda ngeSilumkiso jikelele; bona kwakho Isilumkiso: Yinyaniso okanye Bubuxoki? Isilumkiso iya kuba ngumzuzu weNceba kaThixo kunye nokuVunywa koThixo kwabo bazincamayo kwaye bakhethe ukuba ngoyena Bathathu Emnye uNgcwele kunye noKumkanikazi wethu noMama. Inceba kaThixo ayigqitywanga: Sivile kwezinye iimboni, ezifana UGisella Cardia, ukuba “ixesha lenceba livaliwe.” Oku kuthetha ukuba ixesha lobabalo liyaphela kodwa hayi inceba ngokwayo. iya kunika amanye amathuba kubantwana bayo sakuba sidlulile iSilumkiso.
Zinkulu iinguqulelo ezenzekayo: abantu baphila ngokujonga abanye abantu njengabaphantsi, bezibandeza uxolo.
Thandazani bantwana, thandazani: IArgentina iya kubandezeleka, abantu baya kubethwa.
Thandazani bantwana, thandazani: IYurophu iya kubonakala ishiywe.
Thandazani bantwana, thandazani: uMtyholi uya kumisela ukuthinjwa.
Thandazani bantwana, thandazani: iBandla liya kugungqiswa.
Sibizelwe ukuba siqhubeke sibathethelela abantu bakaThixo. UKumkanikazi wethu kunye noMama bayalela lo mlo ngokuchasene nobubi kwaye, ekugqibeleni, Intliziyo yakhe eNgenasiphelo iya koyisa. Ngaphandle koloyiko, ngaphandle kokubamba, qhubeka elukholweni, ubeka zonke izenzo zakho kunye nezenzo zakho phambi koBathathu Emnye kwaye uzinikele kuKumkanikazi wethu kunye noMama ukuze ububi bungakuchukumisi. Phambili, Bantu bakaThixo! Sithunywe ukuba sikukhusele. Ngokuthembeka ngokupheleleyo kuBathathu Emnye oNgcwele kunye nokumanyana noKumkanikazi noMama wethu…
Kwiintsuku ezintathu emva kwesi sigidimi, “umkhukula wenkulungwane” wahlasela iphondo laseKhanada, iBritish Columbia; cf. cbc.ca
Funda ngeSilumkiso jikelele; bona kwakho Isilumkiso: Yinyaniso okanye Bubuxoki?
Sivile kwezinye iimboni, ezifana UGisella Cardia, ukuba “ixesha lenceba livaliwe.” Oku kuthetha ukuba ixesha lobabalo liyaphela kodwa hayi inceba ngokwayo.
← ISibhalo-Uwexuko Ngoku
Yima umzuzu-I... →